» जग्गा किनेर तराई झर्न ठिक्क परेका कार्की परिवारका ६ जनाको ह त्या कस्ले गर्यो ? जग्गा किनेर तराई झर्न ठिक्क परेका कार्की परिवारका ६ जनाको ह त्या कस्ले गर्यो ? – हाम्रो खबर
काठमाडौं। संखुवासभाको उमलिङमा एकै परिवारका पाँचजनाको हत्याको कारण पैसा रहेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । पैसा लुट्ने उद्देश्यका साथ हत्या भ¥एको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको बुझिएको छ ।२० भाद्रको राति मादि नगरपालिका १ स्थित उमलिङमा घरमुली ८५ वर्षीय बौदमान का¥र्की मात्र जिवित भेटिएका थिए । उनकी ८४ वर्षीया पत्नी पार्वती कार्की, ५२ वर्षका छोरा तेजबहादुर कार्की, बुहारी ५२ वर्षीया कमला कार्की, नातिनी बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की, पनाति वर्ष ८ का विपिन कार्की र पनातिनी वर्ष ५ की गोमा कार्की मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार पार्वतीको शव घरमा नै फेला परेको थियो । तेजबहादुरको शव रोडको भित्तामा, कमला र रञ्जनाको शव खोलामा भेटिएको थियो । वि¥पिन र गोमाको शव एक किलोमिटर टाढा बारीमा मृत फेला परेको थियो ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट वृद्धाको हत्या पछि छोराबुहारी र नातिनीबुहारीलाई नियन्त्रणमा लिएर टाढा लगी हत्या गरेको देखिएको छ । लुटेराहरु¥लाई मृत¥कले चिनेको र अपराध खुल्न सक्ने ठानेर हत्या गरेको हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको प्रहरी स्रोतले बतायो । ८ वर्ष र ५ वर्षका बालबालिकाको पनि हत्या हुनुले नजिकका आफन्त वा चिनेजानेकाहरुतर्फ अनुसन्धानको सुई घुमेको बुझिएको छ ।
घरको अवस्था र पैसाबारे स¥मेत सूचना पाएको समूहले हत्या गरेको हुनसक्ने देखिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । घटनामा धारिलो हतियारको प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ ।कार्की परिवारले झापामा जग्गा किन्न बैना गरेको र केही दिनपछि जग्गा पास गर्ने सहमति समेत गरेको बुझिएको छ । जग्गा खरिदका लागि परिवार मिलेर ८० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर ठिक्क परेका थिए ।
बैनावापत् केही रकम दिएर बाँकी रकम घरमै राखेको र त्यो सूचनाका आधारमा हत्या गरी लुटिएको हुनसक्ने आधारमा अनुसन्धान बढाइएको छ ।प्रहरीको अनुसन्धान टोली संखुवासभाको उमलिङमा खटिएको छ । तालिमप्राप्त कुकुरहरुको समेत प्रयोग भएको छ । विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान बढाइएकाले केही दिनमै खुल्नसक्ने बुझिएको छ ।
तर, प्रहरीले तथ्यप्र¥माणहरु संक¥लन गरेपछि मात्र अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने गरी अनुसन्धान बढाएको बुझिएको छ ।कार्की परिवारका दुई सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । नातिहरु दुईजना विदेशमा गएको र त्यो पैसाले तराई झर्न जग्गा खरिद गर्न लागेको बुझिएको छ । एकजना नातिको परिवार तराईमा बस्दै आएका थिए । अर्का नातिको परिवार बौद्धमान र छोराबुहारीसँगै संखुवासभामै थिए ।